Faharetana - fonosana famoronana BXL
Fonosana maharitra ankehitriny sy rahampitso
Raha ny fahitana ny fikarohana nataon'ny IBM dia nahatratra ny teboka farany ny faharetana. Rehefa mihazona ny raharaha sosialy ny mpanjifa dia mitady vokatra sy marika mifanaraka amin'ny soatoavin'izy ireo. Mpanjifa manodidina ny 6 amin'ny 10 nohadihadiana no vonona hanova ny fahazarany miantsena mba hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana. Manodidina ny 8 amin'ny valinteny 10 no manondro fa zava-dehibe ho azy ireo ny faharetana.
Ho an'ireo izay milaza fa tena / tena zava-dehibe dia mihoatra ny 70% no mandoa premium 35%, eo ho eo, ho an'ny marika maharitra sy tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana.
Zava-dehibe ho an'ny tontolon'izao tontolo izao ny faharetana. Ny BXL Creative dia mandray ny andraikiny amin'ny fanomezana mpanjifa iraisampirenena amin'ny vahaolana fonosana ara-tontolo iainana ary manampy amin'ny antony maharitra maharitra.
Rehefa mifangaro miaraka amin'ny vahaolana eco package ny famoronana. BXL Creative dia nahazo ny loka Best of Show tamin'ny fifaninanana Mobius tamin'ny famolavolana fonosana an'i Huanghelou.
Amin'ity famoronana fonosana ity, ny BXL dia mampiasa taratasy eco sy baoritra mba hananganana rafitra boaty mavitrika, ary atambatra miaraka amina endrika sary hanahaka ny endrik'i Huanghelou. Ny famolavolana fonosana iray manontolo dia manome ny fikolokoloana ny tontolo iainana sy ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny BXL Creative, ary miaraka amin'izay kosa dia manome ny hakanton'ny zavakanto izy io.
Ny fonosana vita amin'ny pulp vita amin'ny bobongolo, izay antsoina koa hoe fibre bobongolo, dia azo ampiasaina ho fitoeran'ny fibre na fitoeran'ny fibre, izay vahaolana amin'ny fonosana eco, satria vita tamin'ny akora fibrous isan-karazany, toy ny taratasy vita fanodinana, baoritra na tady voajanahary hafa (toy ny fary, volotsangana , mololo varimbazaha), ary azo averina averina simba aorian'ny tsingerin'ny fiainana ilaina.
Ny fitomboan'ny lanjan'ny faharetana manerantany dia nanampy ny famonosana pulp ho vahaolana manintona, satria tsy azo ovaina io na dia tsy misy fanodinana tany na fanodinana toerana fanodinana aza.
Miaina ao anaty harmoniana miaraka amin'ny natiora
Ity famolavolana fonosana ity dia mifototra amin'ny foto-kevitra eco ihany koa. Noforonina ho an'ny marika varimbazaha malaza Eko malaza Wuchang Rice izy io.
Ny fonosana iray manontolo dia mampiasa taratasy eco hamonosana ny goba amam-bary ary hanonta sary biby dia eny an-toerana mba handefasana hafatra fa miahy ny fiainana dia sy ny tontolo voajanahary ny marika. Ny kitapo fonosana ivelany koa dia miorina amin'ny ahiahy eco, izay vita amin'ny landihazo ary azo ampiasaina toy ny kitapo bento.
Ohatra iray hafa tonga lafatra mba hampisehoana izay omen'ilay fonosana, rehefa ampidirina miaraka amin'ny vahaolana eco package ny famoronana.
BXL dia mamorona ity famolavolana fonosana ity amin'ny fampiasana fitaovana taratasy eco tanteraka fotsiny, manomboka amin'ny boaty ivelany mankany amin'ny fitoeram-bokatra anatiny. Ny fitoeram-pako dia miangona miaraka amina takelaka vita amin'ny taratasy matevina, manome fiarovana feno ny tavoahangy divay mandritra ny fitaterana sarotra rehetra.
Ary ny boaty ivelany dia natao pirinty tamin'ny "The Tibet Antelope Manjavona" mba hampita hafatra amin'ny fiarahamonina fa manjavona ireo bibidia. Mila mandray andraikitra isika izao ary manao zavatra mifanaraka amin'ny natiora.